निश्चलले यसरी बनाए स्वस्तिमालाई खलासी !
काठमाडौं, २० असोज । नेपाली फिल्म जगतमा निश्चल बस्नेतको नाम चर्चित नै छ । अझ उनीहरुको जोडी उत्तिकै लोकप्रिय छ । केही समय प्रेम सम्बन्धमा रहेर गत बर्षमात्र यी जोडीले बिहे गरेका हुन् । लाग्छ, यो जोडी अर्थात निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्कालाई देखेर मानिसहरु रिसलेे भुतुक्कै हुन्छन् । प्राय: कार्यक्रममा जाँदा निश्चल अाफ्नी श्रीमती स्वस्तिमालाई पनि सँगै लिएर जाने गरेका छन् ।
निश्चलले निर्देशन गरेको फिल्म ‘लुट’ सर्वाधिक सफल भएको थियो । त्यस्तै उनको अर्को फिल्म ‘टलक जंग भर्सेस टुल्के’ ले पनि राम्रै ब्यापार गरेको थियाे । र हालै उनको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘लुट २’ को शुटिङ सकिसकेको छ । उता अभिनेत्री स्वस्तिमा ‘होस्टल रिटन्स’ बाट ठूलो पर्दामा अाएकी हुन् । हालै उनले ‘लभ लभ लभ’ काे पनि शुटिङ सकाएकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय रहने यो जोडीले बुधबार फेसबुकमा एक क्पाप्सनसहित एउटा फोटो अपलाेड गरेका छन् । जसले यतिबेला उनीहरुका फ्यानलाई समेत एकछिन चकित पारेको थियो ।
निश्चलको एउटा फोटोमा उनीहरु अंकमाल गरिरहेको देखिन्छ भने अर्कोमा गाडीसँग देखिएका छन् । उनको फोटो अनुसार क्याप्सन मिलेको छ । सटिक क्याप्सन निकै नै जोडदार पनि छ । उनले फोटोसहित यस्तो क्याप्सन लेख्दै श्रीमतीलाई खलासी भनेका छन् ।
यस्तो छ निश्चलको फोटो क्याप्सन :
When you havealoving wife as your companion driving for 12 hrs straight is also fun.
न काउली न सिमी
डाईबर म खलासी तिमी !!!